Photoshop PSD Iweghachite Ngwá Ọrụ. PSD Mmezi Software. Mmezi Photoshop.
DataNumen PSD Repair bụ kasị mma Photoshop mmezi na mgbake ngwá ọrụ na ụwa. Ọ nwere ike ịrụkwa Photoshop rụrụ arụ ma ọ bụ mebiri emebi PSD na PDD onyonyo onyonyo wee weghachite ọtụtụ data gị dị ka o kwere mee, si otú ahụ na-ebelata ọnwụ na nrụrụ faịlụ.
4.90 / 5 (site na 1,632 votes)
Gịnị mere DataNumen PSD Repair?
Ezigbo DataNumen Staff
Ana m ekele gị maka ịme "DataNumen PSD Repair". Enwere m otu agadi
faịlị nke m na-ejide kemgbe 2000. E kere ya
faịlị nke m na-ejide kemgbe 2000. Emepụtara ya na
PhotoDeluxe, na mbipute PDD Photoshop enweghị ike ịgụ.
Have maghị ụdị obi a Iụrị m nwere ịlele, budata, yana aga nke ọma
weghachite software gi na otu faịlụ a.
Main Akụkụ na DataNumen PSD Repair v2.9
Nkwado iji weghachite PSD na faịlụ PDD nke Adobe Photoshop mepụtara niile.
Nkwado iji weghachite ihe oyiyi yana akwa dị iche iche.
Nkwado iji weghachite pikselụ, akụkụ, omimi omimi na palette nke ihe oyiyi na akwa.
Nkwado iji nwetaghachi ederede na RLE abịakọrọ oyiyi.
Nkwado iji weghachite PSD oyiyi na omimi nke 1, 8, 16, 32 ibe n'ibe kwa ọwa.
Nkwado iji weghachite PSD onyonyo nwere agba dika bitmap, grayscale, edeputara ya, RGB, CMYK, mutlichannel, duotone, lab.
Nkwado ịrụzi PSD na faịlụ PDD na mgbasa ozi rụrụ arụ, dị ka diski diski, Zip diski, CDROM, wdg.
Nkwado ịrụzi nnukwu oyuyo foto Photoshop.
Nkwado mwekota na Windows Explorer, n'ihi ya, i nwere ike ịrụzi a Photoshop oyiyi faịlụ na onodu menu nke Windows Explorer mfe.
Nkwado ịchọta ma họrọ PSD na PDD faịlụ idozi na kọmpụta ndị ahịa.
iji DataNumen PSD Repair iji weghachite Foto Photoshop mebiri emebi
Mgbe Photoshop PSD oyiyi faịlụ mebiri emebi ma ọ bụ merụọ n'ihi ọtụtụ ihe ma ị nweghị ike imeghe ha na Adobe Photoshop, ị nwere ike iji DataNumen PSD Repair i scanomi ihe PSD faịlụ na-agbake data site na faịlụ dị ka o kwere mee.
Cheta na: Tupu na-agbake ọ bụla mebiri emebi ma ọ bụ rụrụ arụ PSD faịlụ na DataNumen PSD Repair, biko mechie Photoshop na ngwa ọ bụla ọzọ nwere ike ịnweta faịlụ ahụ.
Họrọ ndị mebiri emebi ma ọ bụ ndị rụrụ arụ PSD faịlụ a ga-arụzi:
Nwere ike itinye ihe na PSD aha faịlụ ozugbo ma ọ bụ pịa
bọtịnụ na-agagharị na họrọ faịlụ. I nwekwara ike pịa
bọtịnụ chọta PSD faịlụ a ga-arụzi na kọmputa mpaghara.
Site na ndabara, DataNumen PSD Repair ga-enyocha isi iyi PSD faịlụ, weghachite onyonyo jikọtara ọnụ na akwa, wee chekwaa ha dị ka faịlụ onyonyo dị iche. The natara oyiyi faịlụ na-outputted n'ime a ndekọ aha ya bụ xxxx_recovered, ebe xxxx bụ aha nke isi iyi PSD faịlụ. Dịka ọmụmaatụ, maka isi mmalite PSD faịlụ mebiri emebi.psd, ndabara mmepụta ndekọ maka natara oyiyi faịlụ ga-Damaged_recovered. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ iji aha ọzọ, biko pịa ma ọ bụ tọọ ya dịka:
Nwere ike itinye aha ndekọ aha ozugbo ma ọ bụ pịa
bọtịnụ na-agagharị na họrọ ndekọ na.
bọtịnụ, na DataNumen PSD Repair ga start na-enyocha ma na-arụzi isi iyi ahụ PSD faịlụ. Ogwe ọganihu
Mgbe mmezi usoro, ọ bụrụ na isi iyi PSD faịlụ nwere ike ịrụzi nke ọma, merged image na n'ígwé na PSD a ga-echekwa faịlụ na ndekọ mmepụta nke akọwapụtara na nzọụkwụ 3. And ga-ahụ igbe ozi dị ka nke a:
Ugbu a, i nwere ike imeghe natara image faịlụ na mmepụta ndekọ na kwekọrọ ekwekọ ngwa.
DataNumen PSD Repair 2.4 weputara na Disemba 23th, 2020
DataNumen PSD Repair A na-ahapụ 2.2 na November 6th, 2020
DataNumen PSD Repair A tọhapụrụ 2.1 na June 11, 2020
DataNumen PSD Repair A tọhapụrụ 2.0 na Disemba 8, 2013
Kwado Windows 7 na 8.
DataNumen PSD Repair A na-ahapụ 1.4 na Eprel 24, 2008
Nkwado zuru ezu na Windows Vista.
Advanced Photoshop Mmezi 1.1 wepụtara na Nọvemba 22, 2005
Melite ziri ezi nke mgbake.
Advanced Photoshop Mmezi 1.0 wepụtara na July 12, 2005
Ike ngwá ọrụ iji naghachi rụrụ arụ Photoshop oyiyi (PSD, PDD) faịlụ
Dozie ma weghachite AutoCAD rụrụ arụ DWG files
Dozie ma weghachite Acrobat rụrụ arụ PDF faịlụ.